देशमा विकासको लहर चलेको छ, काेराेनाले पनि रोक्न सकेन : प्रधानमन्त्री ओली « Drishti News
दाङ, १२ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको लहरलाई कोभिड-१९ ले पनि रोक्न नसकेको बताएका छन् ।
दाङमा पुल उद्घाटनका लागि आएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘देशमा विकासको लहर चलेको छ । कोभिड-१९ ले पनि हामीलाई विकास निर्माणका काममा लगातार अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेन । केही-केही प्रतिकुलताहरु थप्यो । तर पनि हामीले ती प्रतिकुलताहरुलाई चिरेर फेरि अनुकुलतामा बदल्दै अगाडि बढ्यौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देश अगाडि बढ्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कोभिडको समयमा पनि काम हुन्छ भन्ने दृष्टान्त यस पुलको यही अवधिमा निर्माण हुनु पनि हो, देश अगाडि बढ्छ । देश अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’
‘हामी संविधानको रक्षा गर्छौँ, यस प्रणालीको रक्षा गर्छौँ, व्यवस्थाको रक्षा गर्छौँ, यस प्रक्रियालाई सुरक्षित ढंगले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ, यो प्रक्रिया यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुको उद्देश्य देशमा सुशासन र विकास ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘सुशासन र विकासलाई हामी प्रत्याभूत गर्दै हामी अगाडि बढाउनेछौँ ।’
‘भ्रममा नपर्नुस् पार्टी फुट्दैन’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले उचित जवाफ दिएको बताए । उनले भने, ‘दुईचार जना मानिस पार्टीको बैठकमा नआएर बाहिर गएर, चौतारीमा बसेर म अध्यक्ष भएँ भनेर घोषणा गर्दै हिँडेका छन्’, ओलीले भने, ‘त्यो पनि हिजो निर्वाचन आयोगले खत्तम पार्दियो । अध्यक्षसध्यक्ष कोही भएका छैनौ भनेर ।’
‘तपाईंहरु अचम्म मान्नुहुन्छ होला–दुईचार जना मानिस बैठकमा नआएर विभिन्न बैंक्वेट र रेष्टुराँहरुमा बसेर केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाले रे, साधारण सदस्यबाटै निकाले रे ! हाँस्न मन लागेन तपाईंहरुलाई ? उनीहरु मलाई भरसक यो पृथ्वीमै नरहे हुन्थ्यो भन्छन् । तर हुँदैन,’ सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूले नभइ पार्टी फुटाउन उनीहरुनै लागेको आरोप पनि लगाए ।
‘पार्टी फुटाउन चाहेका छन् । तर भ्रममा नपर्नुस् पार्टी फुट्दैन । दुईचार जना मानिस देश, जनताको भलो नगर्ने आत्मकेन्द्रीत कुलंगार र भस्मासुरहरुले पार्टी छोडे भन्दैमा आन्दोलन कमजोर हुनेवाला छैन’, ओलीको भनाइ छ । उनले निर्वाचन नगर भनेर आयोगमा भन्न जाने त्यस्ता पनि लोकतन्त्रवादी हुन्छन् ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
‘चुनाव ताेकिएकै समयमा हुन्छ’
प्रधानमन्त्री ओलले चुनाव ताेकिएकै मितिमा हुने दाबी गरे । ‘अब चुनाव सुरु भइसकेको छ, तपाईँहरू चुनावको तयारी गर्नुहोस्, प्रचारप्रचारमा लाग्नुहोस्,’ उनले भने, ‘२०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ, वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ ।’
उनले सबैलाई चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गरे । ‘कसैले निर्वाचन हुँदैन, केपी ओलीले निर्वाचन गराउँदैन, गराउनको लागि यो घोषणा गरेकै होइन भन्नेहरुलाई भन्न दिनुहोस्, आफू चाहिँ तयारीमा लाग्नुहोस्’, उनले भने ‘चुनाव भनेकै दिन हुन्छ र चुनावमा हामीले शान्दार सफलता हासिल गर्ने छौँ, गर्नुपर्छ । त्यसैले यस काममा लाग्न म साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’